IGoogle imemezele ukuxhaswa kweRust ngentuthuko ye-Android | Kusuka kuLinux
I-Google imemezele ukusekelwa kweRust yokuthuthuka kwe-Android
Okuhle | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 09/04/2021 21:00 | Izaziso
Ngo-Ephreli 6 AbakwaGoogle bamemezele lokho Iphrojekthi Yomthombo Ovulekile we-Android (I-AOSP) manje izokweseka ulimi lweRust ngentuthuko yohlelo lwayo lokusebenza ngomakhalekhukhwini, lesi simemezelo siyingxenye yemizamo yenkampani yokubhekana nezinkinga zokuphepha kwememori kuhlelo lokusebenza.
Ngokuya nge-Google, amaphutha okuphepha kwememori avame ukusongela ukuphepha kwedivayisi, ikakhulukazi izinhlelo zokusebenza nezinhlelo zokusebenza. Isibonelo, ohlelweni lokusebenza lwe-Android mobile, i-Google ithi ithole ukuthi ngaphezu kwengxenye yobungozi bokuphepha okukhulunywe ngabo ku-2019 kube ngumphumela wezinambuzane zokuphepha kwememori.
Lokhu, ngaphandle kwemizamo ebanzi eyenziwe yinkampani nabanye ababambe iqhaza kuphrojekthi ye-Android Open Source, yokutshala imali noma ukusungula ubuchwepheshe obuhlukahlukene, kufaka phakathi i-AddressSanitizer, abathuthukisi bememori abathuthukisiwe, kanye nama-fuzzers amaningi namanye amathuluzi wokuqinisekisa ikhodi.
"Ngaphezu kwezilimi ezigcina imemori njengeKotlin neJava, siyajabula ukumemezela ukuthi iphrojekthi yomthombo ovulekile we-Android manje isekela ulimi lokuhlela iRust lokuthuthukisa uhlelo lokusebenza lwe-Android," kusho uGoogle kubhulogi yakhe.
“Sitshala umzamo omkhulu nezinsizakusebenza ekutholeni, ekulungiseni nasekunciphiseni lesi sigaba samaphutha, futhi le mizamo iyasebenza ekuvikeleni inani elikhulu lamaphutha ukuthi lingagcini ngezinguqulo ezahlukahlukene ze-Android. Kodwa-ke, ngaphandle kwale mizamo, izimbungulu zokuphepha kwememori ziyaqhubeka nokuba yimbangela ehamba phambili yezinkinga zokuqina, zihlala zibala cishe ama-70% wobungozi obukhulu bokuphepha kwe-Android, ”kusho uGoogle.
Indlela ephelele yokuphepha kwe-Android inezici eziningi futhi isuselwa ezimisweni nasemasu amaningi. ukufeza izixazululo eziqhutshwa yidatha ezenza ukuxhashazwa okunonya kube nzima kakhulu. Ngasekuqaleni konyaka, iGoogle ibike ukuthi ithimba lepulatifomu le-Android lisebenza kanzima ukuvikela uhlelo lwalo lokusebenzisa amaselula.
IGoogle isebenzisa amafonti ahlukahlukene ukunquma ukuthi iziphi izindawo zepulatifomu ezingazuza kakhulu kuzinyathelo zokunciphisa ezokuphepha. Uhlelo lwe-Android Vulnerability Rewards luwumthombo onolwazi kakhulu: onjiniyela bezokuphepha bahlaziya konke ukuba sengozini okulethwe ngaphansi kwalolu hlelo ukuthola imbangela yomthelela wokuba sengozini ngakunye nobukhulu bawo.
Amazinga aphansi isistimu Esebenzayo idinga izilimi ezihlela uhlelo ezifana no-C, C ++, noRust. Lezi zilimi zenzelwe ukulawula nokubikezela njengezinjongo. Banikeza ukufinyelela kuzinsizakusebenza ezisezingeni eliphansi nezinsiza zohlelo.
Zisebenza kahle ekusetshenzisweni kwezinsizakusebenza futhi zinezici zokusebenza ezilindelekile, ngoba ngokwesibonelo nge-C ne-C ++, unjiniyela unesibopho sokuphatha impilo yonke yememori. Ngeshwa, kulula ukwenza amaphutha lapho wenza lokhu, ikakhulukazi ezindaweni eziyinkimbinkimbi, ezifundwa ngamakhodi amaningi.
Ngokuya nge-Google, iRust inikeza iziqinisekiso zokuphepha memory ngokusebenzisa inhlanganisela yamasheke wesikhathi sokuhlanganisa ukuphoqelela isikhathi sokuphila / ubunikazi bezinto nokuhlolwa kwesikhathi sokusebenza ukuqinisekisa ukufinyelela kwememori okuvumelekile. Lokhu kuvikeleka kutholakala ngokunikela ngokusebenza okulingana nokuka-C no-C ++.
I-Google ikholelwa ukuthi izilimi ezigxile ekuphepheni kwememori njengeRust "ziyindlela engabizi kakhulu yokuvikela amaphutha ememori" ku-boot loader, i-boot esheshayo, i-kernel, nezinye izingxenye ezisezingeni eliphansi zohlelo lokusebenza.
Izilimi ezinjengeJava neKotlin ziyindlela engcono kakhulu yokuthuthukisa izinhlelo ze-Android. Lezi zilimi zenzelwe ukusetshenziswa kalula, ukuphatheka nokuphepha. I-Android Runtime (ART) ilawula inkumbulo esikhundleni sonjiniyela.
Isistimu yokusebenza ye-Android isebenzisa kakhulu iJava, evikela ngempumelelo ingxenyekazi enkulu ye-Android emaphutheni enkumbulo, ngeshwa, ngoba izingqimba ezingezansi zohlelo lokusebenza, iJava neKotlin azifanelekile.
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngenothi, ungaxhumana nemininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google imemezele ukusekelwa kweRust yokuthuthuka kwe-Android
I-Vocal: Iklayenti le-podcast lesimanje, elinamandla, elihle futhi lamahhala le-Linux